Rasmi: Kabir Singh oo noqday filimka 2019 lacagaha ugu badan soo xareeyay bye bye Uri! | Filimside
Home BOX OFFICE Rasmi: Kabir Singh oo noqday filimka 2019 lacagaha ugu badan soo xareeyay...
Rasmi: Kabir Singh oo noqday filimka 2019 lacagaha ugu badan soo xareeyay bye bye Uri!
Shahid Kapoor iyo Kiara Advani filimkooda Kabir Singh ayaa todobaadkiisa sedexaad keenay 35.50 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan wadarta guud mudo 21-cisho ama sedex todobaad inuu filimkan Blockbuster-ka weyn noqday kusoo xareeyay 247 Crore ($35.88m).
Filimka Kabir Singh haatan wuxuu si rasmi ah u noqday filimka lacagaha ugu badan soo xareeyay sanadkan 2019 asigoo dhaafay filimka Uri oo 244 Crore cimri ahaantiisa keenay. Balse waxaa xusid mudan in todobaadka sedexaad ganacsi ahaan Uri inuu sareeyo kaasi oo keenay 37.06 Crore.
Filimka Kabir Singh wuxuu sameeyay 54% hoos u dhac ah todobaadkiisa sedexaad halka todobaadkiisa labaad uu sameeyay 41% hoos u dhac ah waana midda keeni doonto rajadii laga qabay 300 Crore inuu gaaro meesha ka bixi doonto madaama Jimcadan sidoo kale tiyaatarada ugu badan la wareegay filimka Super 30 waxaana sida maangalka ah la dhihi karaa filimka Kabir Singh cimri ahaantiisa 275 Crore ayuu ku istaagi doonaa.
Fadlan hoos kaga bogo Kabir Singh iyo mudo sedex todobaad ah ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Wadarta Guud – 246.71 Crore (Trade Figure)
Previous articleShabakada BOI oo sheegtay in filimka Super 30 si dhex dhexaad ah ku furmay
Next articleMaanta oo Jimco ah iyo ciwaanada ugu muhiimsan ay qorayaan Jaraa’idyada Yurub ugu caansan: